मोदीको नेपाल भ्रमणबारे भारतको संसदमा उड्यो प्रश्न: मोदीलाई लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप
नयाँदिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण (२८–२९ वैशाख) बारे भारतमै प्रश्न उठेको छ । उनको भ्रमणबारे नेपालको संघीय संसद्मा चर्काचर्की चलिरहेका बेला भारतका प्रमुख राजनीतिक दलबीच पनि आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।
प्रतिपक्षी कंग्रेसले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको हिन्दु धार्मिक तीर्थाटनप्रति आपत्ति जनाएको छ । उक्त भ्रमण नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्नभन्दा कर्नाटकको चुनाव प्रभावित गर्न लक्षित भएको आरोप कंग्रेसको छ, कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ ०१, २०७५१३:४४
प्रहरी फेरी ‘गुण्डानाइके’ मनाङ्गेको हिसाव किताव गर्दै ! मनाङ्गे भन्छन् देशका गुण्डाहरू प्रहरी हो !
वायुसेवा कम्पनीले हवाई भाडा बढाउने निर्णय
अब पासपोर्ट ६ किसिमका हुने, थप भए दुई किसिमका अन्य पासपोर्ट !